192.168.8.1- Kutheni le nto i-Intanethi yam icotha?
Iindlela ezi-6 eziphezulu zokumelana noQhagamshelo olucothayo lwe-Intanethi
Akukho nto icaphukisayo kunokuba ne-Wi-Fi emnandi okanye ikhonkco le-Ethernet, nangona kunjalo isantya se-intanethi. Apha ngezantsi kukho ezinye izimvo zokujongana neengxaki, ezichanekileyo, ukoyisa nje isantya se-intanethi.
1. Jonga isicwangciso sakho se-intanethi
Ngamanye amaxesha, uqhagamshelo lwakho lwe-intanethi luyacotha njengoko uhlawula i-intanethi ekrwada. Ngena kwiwebhusayithi yakho kwaye ufumane ukuba yeyiphi isicwangciso onaso. Ngoku ndwendwela fast.com okanye ezinye iisayithi ezizezinye kwaye wenze uvavanyo lwesantya. Eyona ndlela yokukhawulezisa i-intanethi kukuphucula isicwangciso sakho.
2. Nika izixhobo zakho ukulungiswa kwendalo iphela
Jonga umzila wakho kunye nemodem kwaye wenze ukuseta ngokukhawuleza kwaye ubone ukuba kuyasebenza. Vavanya ezinye iiPC ekhayeni lakho ukuze ubone ukuba intanethi iyacotha. Ukuba umba wenzeka kuphela kwi-PC enye, umba kukuba iPC, hayi imodem yakho okanye umzila.
3. Lungisa imiqondiso yakho ye-Wi-Fi
Ukuthetha nge-Wi-Fi, unokuqaphela ukuba i-intanethi kunye ne-router zilungile; nangoku imiqondiso yakho engenazingcingo ibuthathaka. Oku kunokuvelisa ukucotha okudlulileyo-okanye, ezantsi, amava okubhrawuza azaliswe kukulala. Emva koko unokufuna ukuhamba, ukulungisa, kunye nokunyusa i-router yakho ngeendlela ezithile.
4. Cima okanye uthintele ii -apps-hogging zokusebenza
Ukuba i-Hardware ibonakala ngathi iyasebenza, jonga ukuba ngaba ezinye iinkqubo ezongezelelweyo zilawula unxibelelwano. Umzekelo, ukuba ukhuphela iifayile ngeBitTorrent, ukukhangela kwiwebhu kwesiqhelo kuya kuhamba kancinci. Kuya kufuneka uzame ukufaka ulwandiso olunjengeBadger yabucala kunye neAdBlock Plus eya kuthi ibhloke ezimbalwa zentengiso elawula ibhendi, iividiyo kunye nemifanekiso eshukumayo enokuthi itye uqhagamshelo lwakho.
5. Sebenzisa iseva ye-DNS yamva nje
Ngelixa ubhala idilesi kwisikhangeli, iPC yakho isebenzisa into eyaziwa ngokuba yi-DNS ukukhangela nokutolika oko kwidilesi ye-IP ephendula nge-PC. Ngamaxesha athile, nangona kunjalo, iiseva ezisetyenziswa yikhompyuter yakho ukukhangela olo lwazi lunokuba nemicimbi, okanye ziye ezantsi ngokupheleleyo. Ngethamsanqa, unokukhetha ngokukhawuleza okukhululekileyo, njengokusebenzisa i-Cloud flare okanye i-Google DNS.
4. Nxibelelana nomthengisi wakho we-intanethi
Ukuba uwenzile onke amanyathelo abalulekileyo okusombulula kwaye i-intanethi yakho icotha, lixesha lokuba unxibelelane nomthengisi we-intanethi kwaye ujonge ukuba ingxaki isiphelile. Qaphela: sukucinga nje ukuba benze nantoni na engalunganga kwaye uphathe inkonzo yabathengi ngokubhekisele kuyo. Ngokuqinisekileyo uya kufumana iziphumo ezintle ukuba bebekunikezela ngesantya esingalunganga ngalo lonke eli xesha.
5. Ukuphucula iwebhu kunxibelelwano olucothayo
Ukusombulula ingxaki kwi-intanethi ecothayo kungathatha ixesha, kwaye okwethutyana usafuna ukubrawuza. Okanye mhlawumbi usekhefi okanye kwinqwelomoya, kwaye akukho nto unokuyenza ngesantya esicothayo. Ke ngoko lixesha lokunyusa iwebhu yakho kunxibelelwano olucothayo.
6. Sebenza ngobukrelekrele
Ukuba ufuna ukufumana umsebenzi ugqityiwe kunxibelelwano olucothayo, kuya kufuneka ukhethe imisebenzi eyahlukileyo kunokuba i-intanethi ibiphezulu. Yahlulahlula imisebenzi yakho kububanzi bebhendi-ukukhanya kunye ne-bandwidth-enzima. Xa uqhagamshelo olucothayo yenza ukukhanya kukhanye kwaye uqokelele yonke imisebenzi ye-bandwidth-enzima ngokudibeneyo ukuze uyenze wakube uqhagamshele ngokukhawuleza.
Hlaziya iRouter yakho kwiiSeto eziNgagqibekanga